I-Hand Sanitizer, Isihlanzi Sokuwasha, Izibulala-magciwane ezingama-84 - Huansheng
I-Hebei Huansheng Low Carbon Technology Co., Ltd. yasungulwa ngo-2013, okuhloswe ngayo ukukhuthaza imodeli yezomnotho esekelwe ekusetshenzisweni kwamandla okuphansi, ukungcola okuphansi nokukhipha okuncane, kanye nokunciphisa ukukhishwa kwegesi eyingozi.
465ml 84 isibulala-magciwane
10L 84 Isibulali magciwane
Hlanza Iwashi Yokuhlanza Amagciwane
Izibulali magciwane ezingawashwa izandla
4L 84 Isibulali magciwane
Xhumana nathi ukuze uthole amasampula engeziwe e-albhamu
Ngokwezidingo zakho, zenzele ngendlela oyifisayo, futhi unikeze ilebula yangasese
Asigcini nje ngokukhiqiza imikhiqizo, kodwa futhi sihlela ukulethwa okusheshayo, ukuqeqeshwa kokukhuthazwa komkhiqizo kanye nesevisi yokuthengisa.
Ukucutshungulwa kwe-OEM/ODM, ukucutshungulwa kwezimonyo/ okokuhlanza, i-supplu yempahla eluhlaza yamakhemikhali yansuku zonke kanye nokuqeqeshwa kokuwasha.
Sinesikhungo socwaningo lwesayensi nokuhlola, esinonjiniyela abaphezulu aba-5, onjiniyela abasizi abayi-15, i-nanotechnology eyisiza yobuchwepheshe obuphezulu.
Siyakwamukela ukusivakashela nganoma isiphi isikhathi futhi uxhumane nathi, kungakhathaliseki ukuthi ukuphi, ithimba lethu lezobuchwepheshe kanye nethimba labadayisi lizoxazulula ukungabaza kwakho, lincome izimpahla futhi likulethe imikhiqizo ezandleni zakho ngesikhathi esifushane.
Isibulala-magciwane esilungele ukusetshenziswa kwezokwelashwa sinalezi zinzuzo ezinhlanu
Kuvame kakhulu ukukhetha izibulala-magciwane ezifanele zezokwelapha ukuze zisetshenziswe ekubulaleni amagciwane okusezingeni eliphansi kwezinto ezingabalulekile ezikhungweni zezokwelapha. Ukubulala amagciwane okusebenzayo kuqukethe izingxenye ezimbili, izibulala-magciwane kanye nezinqubo zokubulala amagciwane. Izinqubo zokubulala amagciwane zidinga isiqiniseko sokuthi izibulala-magciwane ziyafinyelela...
Ungakhetha kanjani i-disinfectant efanelekile?
Kuvame kakhulu ukukhetha isibulala-magciwane esifanele ukusetshenziswa ezikhungweni zezokwelapha, esizosetshenziswa njengendlela ephansi yokubulala amagciwane yezinto ezingabalulekile. Okwamanje azikho izincwadi ezibuyekezwe ngontanga ngalesi sihloko. Ukubulala amagciwane okusebenzayo kuqukethe izici ezimbili, isibulala-magciwane nesibulala-magciwane...
Amahora angama-24 ku-inthanethi
I-Hebei Huansheng Low Carbon Technology Co., Ltd.
Sihlinzeka ngezinto zokuhlanza izingubo ezihlanganisiwe, ezinelebula yangasese, isicoci sesandla, isibulala-magciwane esingu-84 kanye nokhilimu we-freckle wokunakekela umuntu.
© Copyright - 2020-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.